China Pasteurizer & Sterilizer ifektri kanye nabaphakeli | Sawubona
Izindlela ezahlukahlukene ze-Pasteurizer noma i-sterilizer efana ne-Tunnel type pr plat sterilizer yakhelwe futhi yenziwa ngezifiso ngokuya ngemfuneko yeklayenti kwezinye iziphuzo.
Uhlobo lwe-1.Tunnel Pasteurizer-Spray Sterilizer
Imishini isebenzisa ukuhambisa inzalo yamanzi ashisayo, amanzi afudumele ngaphambi kokupholisa, amanzi abandayo apholisa ukwelashwa okuyizigaba ezintathu noma ukwelashwa okunezigaba eziningi, inzalo nesikhathi sokupholisa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi, imvamisa yokulawula, ukulawula okuzenzakalelayo kanye ne-automation ephezulu.
* It usebenzisa izinga lokushisa eliphakeme ukumelana polypropylene (HTPP) chain plate futhi isebenzisa izingxenye Japanese kagesi. I-fuselage yenziwe ngensimbi engagqwali.
* Ikhwalithi ephezulu yepulasitiki enepuleti lamaketanga, ingasebenza ezingeni lokushisa eliphakeme isikhathi eside (≯98), izinga lokushisa eliphakeme lesikhashana elifushane 104 ° C;
* Isigaxa Solid ububanzi-engeli umlomo wombhobho, ukusatshalaliswa ukugeleza ngisho futhi uzinzile, futhi inkambu lokushisa njalo;
* Ukusetshenziswa okuphelele kobuchwepheshe obuningi bokuvuselela ukushisa kwamandla, ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo;
* Inzwa yethempelesha Pt100, ukunemba kokulinganisa okuphezulu, kufika ku- ± 0.5 ° C;
* Inhlanganisela yezinqubo eziningi, inqubo enengqondo, ingaphatha izinto ezahlukahlukene;
* Ukushisa kwenzalo kulawulwa yi-PLC touch screen.
* Ukulawulwa okuphelele kokuguqulwa kwesilinganiso semvamisa, kungashintshwa ngokuya ngenqubo yokukhiqiza;
* Inokuphakelwa okuzenzakalelayo nokukhipha indlela yamabhodlela e-PP angeyona eyindilinga, izikhwama zepulasitiki, ibhokisi lephahla, amabhodlela engilazi, amathini neminye imikhiqizo, futhi ushintsho kulayini wokukhiqiza ohambisa othomathikhi lubushelelezi;
* Nikeza abasebenzisi ngezinsizakalo zokuhlola ukusatshalaliswa kokushisa, sebenzisa amasistimu ochwepheshe, ukuqapha okuku-inthanethi kwezinguquko zokushisa kuyo yonke inqubo yokukhiqiza.
* Ngokulawula okuzenzakalelayo kokushisa kwenzalo, ukulungiswa okungenasinyathelo kwesikhathi sokuvala inzalo:
* Isetshenziswe kabanzi ezinhlobonhlobo zeziphuzo zamabhodlela, ezisemathinini e-acid, iziphuzo ze-electrolyte, utshwala, izinongo neminye imikhiqizo yokuhlanzisisa nokupholisa;
* Le mishini ingaklanywa ngokuya ngezimo zokuvala inzalo kanye nezidingo zokukhiqiza ezibekwa phambili ngumsebenzisi.
I-2.Pasteur plate sterilizer
Ubhiya obulala inzalo ikakhulukazi busebenzisa ubuchwepheshe be-72 ° C, i-27PU value (inzalo yunithi) ukubulala imvubelo neminye imithombo yokungcola kwebhayoloji, ukuze ikwazi ukugcina izakhamzimba zikabhiya nesikhathi sokugcina sesikhathi eside ngaphansi kwesimo sokushisa okuncane kakhulu kokuvala inzalo. I-Pasteurization iphela ngemizuzwana engama-30, igcina ukunambitheka okuhle nokunambitheka
Ubhiya osalungiswa ucindezelwa yipompo kusuka kwinqubo yangaphambilini bese uthunyelwa ku-sterilizer ukuze kushintshwe ukushisa kwangaphambili. Ngemuva kwalokho ingena esigabeni sokuvala inzalo bese iyafudunyezwa futhi ihlanzwe ngamanzi ashisayo ngama-75 degrees Celsius. I-avenue yeshumi nesikhombisa ingena esigabeni sokubamba ku-72 ° C ukuthola inzalo yokushisa njalo Ngemuva kokushintshaniswa kwangaphambi kokushiswa, kupholiswa ngamanzi e-0-2 ℃. Ingxenye yokupholisa impahla ithunyelwa ngezansi kwe-4 a ethangini eliyinyumba noma emshinini wokugcwalisa wokugcwalisa.
Langaphambilini Uhlelo lokubambisa amanzi
Olandelayo: Ulayini womshini wokugcoba uwoyela